नेपाल आज | सी र दहालकाे भेटवार्ता २ मिनेट मात्र, किन भयाे यस्ताे?
सी र दहालकाे भेटवार्ता २ मिनेट मात्र, किन भयाे यस्ताे?
सोमबार, २७ असोज २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज (MG)
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनिफिङले असोज २५ गते साँझ ५ बजे त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलमा ओर्लिएपछि उनको समकक्षी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डरीले स्वागत गरिन्।
सीलाई राष्ट्रिपति भण्डरी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितीमा ‘गार्ड अफ अनर’ प्रदान गरियो। सीले राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेर होटेल सोल्टी फर्केलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग एक्लाएक्लै भेट गरेका हुन्। देउवा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला चिनियाँ राष्ट्रपति च्याङ चमिनले १९९६ मा नेपाल भ्रमण गरेका थिए। चिनियाँ राष्ट्रपति सी देउवासँग भेट गरी राजनीतिक भेटवार्ता थालेका थिए।
भेटमा खासगरी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र कांग्रेस बीचको सम्बन्धलाई सहकार्य र थप अन्तरक्रियामुखी बनाउन सीले जोड दिएका थिए। उनले सभापति देउवालाई चीन भ्रमणको निम्तो दिएको सहमहामन्त्री डा।प्रकाशशरण महतले बताए। चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालमा चीनविरोधी गतिविधि हुन नदिन र चीनसँगको सम्बन्धलाई कांग्रेसले दिएको महत्त्वप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेको पनि बताए।
नेपाली कांग्रेस र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीचको मित्रता पुरानो छ। अहिले पनि चीनमा वीपी कोइरालाको नाम लिइन्छ। चिनियाँ राष्ट्रपतिले निकै महत्त्व दिँदै कांग्रेस सभापतिलाई सुरुमै भेट गरेको चिनियाँ अधिकारीले बताए।
नेपालले बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरेर त्यसको योजना अघि बढाएको विषयमा पनि उनले जोड दिँदै नेपाललाई हित हुने परियोजनामा चीन उत्साहित रहने सीले स्पष्ट पारेको जानकारी देउवाले दिएको सहमहामन्त्री महतले बताए।
देउवासँगको भेटलाई निकै अर्थपूर्ण भनिएको छ। करिब २० मिनेट भएको भेटमा विकास सहकार्यकै कुराकानी भएको देउवाले बताए।
देउवाले सीसँग नेपाललाई चीनले देखाएको सदाशयताप्रति धन्यवाद दिँदै नेपालको विकास परियोजनामा सहयोग, लगानी, पर्यटन क्षेत्र प्रवद्र्धनमा सहकार्य गर्न आग्रह गरेका थिए।
चीनले नेपालको पूर्वाधार विकासमा गर्दै आएको सहयोगको प्रशंसा गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले आर्थिक रूपमा विश्वकै उदीयमान मुलुक चीनबाट नेपालको विकासमा थप लगानीका लागि आग्रह गरेका थिए।
देउवालाई भेट्नुअघि विमानस्थलमा नै राष्ट्रपति सीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग एक्लाएक्लै भेटेका थिए। भारतको महिबलपुरममा भारतका प्रधानमन्त्रीसँग ६ घण्टा एक्लाएक्लै कुराकानी गरेका सीले यहाँ पनि एक्लाएक्लै भेटलाई प्राथमिकता दिएका छन्। सीले अन्य नेतालाई शनिबार राष्ट्रपतिले दिएको रात्रिभोजमा संक्षिप्त परिचयात्मक भेट गरेका थिए।
असोज २६ गते आइतबार सत्तारुढ दलका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सचिवालय सदस्यसहित सीले भेटघाट गरे । ९ सदस्यीय नेकपाको सचिवालय सदस्यमध्ये प्रधानमन्त्री ओली भेटमा सहभागी थिएनन्। सचिवालय सदस्यहरुसँगको भेटघाट लामो समय भएको थियो। जसकारण प्रचण्डसँगको भेटवार्ताको कार्यक्रममा छोट्टिएको थियो। सचिवालय सदस्यसँगको सामूहिक भेटवार्ता लगत्तै दाहालले एक्लै सीसँग कुराकानी गरे। तर बाहिर सूचना आएजस्तो दहालसँगको लामो भेटवार्ता भएन। नेकपा उच्च स्रोतका अनुसार दहाललाई भेटवार्ताको लागि ३० देखि ४० मिनेट समय दिने बताइए पनि २ मिनेट मात्र भेटवार्ता भएको खुलासा भएको हो।
चिनियाँ पक्षकाे उच्च स्राेतका अनुसार सी काे सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले समय अभावकाे कारण देखाउदै संकेत गरेपछि भेटवर्ता २ मिनेट मात्र भएकाे थियाे।
दहालसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्री ओलीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए। त्यसपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी स्वदेश फिर्ता भएका थिए।
वेस्यागमनमा संलग्न क्रसर व्यवसायी यादव कांग्रेस प्रदेश सभापतिको दावेदार